Philippe Coutinho oo aqbalay ku biirista Tottenham iyo hal qof oo sabab u noqday inuu heshiiskaasi dhici waayo – Gool FM
(Munich) 01 Abril 2020. Naadiga Tottenham Hostpur ayaa ku dhawaatay inay xagaagii la soo dhaafay ay Barcelona ka soo qaataan Philippe Coutinho.
Xagaagii aynu kasoo gudubnay ayuu Coutinho aqbalay inuu ku biiro naadiga Ingiriiska ka dhisan, hase ahaatee heshiiskaas ma uusan hirgelin iyadoo uu u sabab ahaa maamulaha guud ee Spurs, Daniel Levy sida laga soo xigtay khabiirka dhanka suuqa ka faallooda ee Guillem Balague.
Laacibka reer Brazil ayaa la dhibtoonayay inuu helo qaab ciyaareed wanaagsan tan iyo markii uu Liverpool ka soo dhaqaaqay bishii Janaayo ee 2018.
Si kastaba ha ahaatee, Coutinho ayaa doortay inuu ku biiro Bayern Munich kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu ku biiro kooxda Tottenham.
Balague ayaa hadda shaaca ka qaaday sababta rasmiga ah ee Coutinho ka hor istaagtay inuu noqdo ciyaaryahan Spurs ka tirsan.
Waxa uu khabiirku sheegay in Levy uu doonayay inu Coutinho uu yareeyo mushaharka uu qaadanayo, inkastoo horraan ay isla meel dhigeen heshiiska shaqsiga, sidaas darteed Coutinho ayaa iska diiday inuu ka mid noqdo kooxda London ka dhisan maadaama uu Levy ka baxay ballantii lacageed ee ay markii hore dhigteen.
Balague ayaa sidoo kale daaha ka rogay in saxaafadda ay meel cidlo ah ka xaganeyso Mauricio Pochettino oo la fahansanaa inuu iska diiday Coutinho, waxaana isagoo bartiisa YouTube-ka ka soo warramaya khabiirka reer Spain uu caddeeyay in Pochettino uu u baahnaa kubbad-sameeyihii hore ee Inter Milan, balse guddoomiyaha Spurs uu sabab u noqday inay sheeko walba burburto.
Waxa uu sidoo kale Balague hoosta ka xarriiqay in Levy iyo Coutinho ay isku fahmi waayeen shardi lacageed oo dhanka mushaharaadka ah, sidaas ay ku soo afjarantay in Tottenham ay qaadato laacibkii hore ee Liverpool.
27-sano jirkan ayaa hadda waqti liita oo amaah ah ku qaadanaya Kooxda Bayern Munich, waxaana la filayaa inuu ku soo laabto Barca marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan.
Xiddiga Kooxda Bayern Munich ee Jerome Boateng oo Shil Baabuur ku galay Jarmalka... (Maxaa dhibaato ah oo soo gaaray?)